Ikati ye-Singapura | Amakati eNoti
Ikati ye-Singapura luthando lwesilwanyana. Uyakuthanda ukuhlala ekunye nomntu omkhathalelayo, onwabele ii-caress zakhe kunye nemidlalo yakhe. Ngapha koko, yaziwa ngokuba "yikati ye-velcro" ngenxa yokuxhomekeka kusapho lwayo.
Ngaphandle kwendlela anothando ngayo, akakaziwa kakuhle, ke ngoku ukusuka apha siza kunika isanti yethu ukuze abantu abaninzi bazi ukuba unjani kunye nokhathalelo olufunwa yile kati intle.
1 Imvelaphi kunye nembali yekati ye-Singapura
3 Ukuziphatha kunye nobuntu
4 Ukunyamekela ikati ye-Singapura
4.0.4 Unonophelo lwezilwanyana
4.0.5 Inkampani kunye nothando
5.1 Ngaba inokufunyanwa ukuba yamkelwe?
Imvelaphi kunye nembali yekati ye-Singapura
Imvelaphi yolu hlobo ifumaneka eSingapore, apho iisampulu ezininzi zihlala khona ngoku kwindawo ephantse ibe yeyasendle. Ngo-1975 uHal noTommy Meadow baseCalifornia bagqiba kwelokuba bazise iikati ezine eUnited States. TommyUkongeza ekubeni ngumfuyi weekati zama-Abyssinia, ezaseBurma kunye nezeSiamese, wayekwangumgwebi wazo zonke iintlobo, ke ngoko, kunye nenkosikazi yakhe, Wenza konke okusemandleni akhe ukwenza iSingapura yaziwe kulo lonke elaseMntla Melika, Ukusa kwimiboniso.
Kwiminyaka embalwa kamva, ngoo-80, Ikati ye-Singapura yathathelwa ingqalelo njengohlobo lwe-TICA kunye neCFA. Kwaye okwangoku, ikwinqanaba lama-22 ekuthandweni kwabangama-41 abadweliswe kuMbutho wabafuyi beKati.
Ixesha labo lobomi yiminyaka eyi-12-14.
Yikati encinci leyo inobunzima obungadluli kwi-2kg (imazi) okanye 4kg (eyindoda). Inomzimba oqinileyo, wemisipha onentloko ejikeleziweyo kunye no "M" ebunzi. Amehlo amile okweamangile, kwaye idyasi imfutshane, ibrind brindle, igudile, isilika kwaye imdaka ngombala.
Umsila ulinganiswe kakuhle nawo wonke umzimba. Kwaye iindlebe zazo zinxantathu.
Ukuziphatha kunye nobuntu
Ngaba uboya Unothando kakhulu othanda ukungqongwa ngabantu obathandayo. Uyakonwabela ukonwaba kunye nabantu abamgcinayo, nokuba kukudlala ngentambo okanye ukulala esofeni. Kwakhona, ngenxa yesayizi yayo encinci ihlengahlengisa kakuhle kakhulu ukuba ihlale kwindlu ukuba nje ukhathalelo olusisiseko lukhona ukuba yonke ikati ifuna.
Enye yezinto esingafanele siyenze kukucinga ukuba awuyidingi imithambo, kuba ngumfazi onamandla amaninzi. Ke ngoko, kunyanzelekile ukuba indlu ihlengahlengiswe kuleyo inoboya, ibeke ishelufa kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo ukuze akwazi ukutsiba kubo kwaye alibone ilizwe lakhe likwindawo efanelekileyo, kwaye abantu abahlala ekhaya bonwabele ukwenza izinto kunye nentwana yabo. umhlobo omkhulu.
Ukunyamekela ikati ye-Singapura
Ukuze ibe yikati eyonwabileyo, kuya kufuneka uyinyamekele ngale ndlela ilandelayo:
Ukuba sisilwanyana esidla inyama ukutya kwayo okusisiseko kufuneka kube yinyama. Ke, ukuba uyayondla, kuyacetyiswa kakhulu ukuba ingaqulathi ukutya okuziinkozo okanye iimveliso ezivela kuye. Olunye ukhetho kukumnika ukutya kweYum kweekati, okanye uBarf ngoncedo lwesondlo se-canine.
Iinwele: iya kwanela ukuyibrasha kanye ngemini.
Amehlo: kanye rhoqo kwiintsuku ezingama-2-3 kuyacetyiswa ukuba uzicoce ngegeyile emanzi ene-chamomile efudumeleyo. Sebenzisa i-gauze ecocekileyo kwiliso ngalinye.
Iindlebe: kube kanye ngeveki kufuneka ucoce indlebe ngethontsi elikhethekileyo lendlebe kunye ne gauze ecocekileyo kwindlebe nganye.
Yonke imihla kufuneka udlale. Kwiivenkile zezilwanyana uya kufumana iintlobo ezininzi ze iikati zokudlalaKodwa ukuba unayo ibhokisi yekhadibhodi anokungena kuyo kakuhle kwaye alale phantsi ngaphandle kwengxaki, yenza imingxunya embalwa anokungena naphuma kuyo kwaye uyakubona ukuba wonwabile kangakanani.
Nangona luhlobo olunempilo entle, oku akuthethi ukuba alunakuze ligule. Ewe kunjaloUkuba ukrokrela ukuba uyagula, kufuneka umse kugqirha wezilwanyana ukuze uvavanye kwaye uphathe.
Inkampani kunye nothando
Yeyona nto ibaluleke kakhulu leyo. Ukuba awumthandi okanye umkhathalele, uya kuziva kakubi kangangokuba angayeka nokufuna ukuqhubeka..
Ikati ye-Singapura sisilwanyana esihle. Ke ngoko, ngekhe simangaliswe ukuba ufuna ukwabelana ngeminyaka embalwa yobomi bakho nale furry intle. Nangona kunjalo, ukuba nesilwanyana, nokuba kuyintoni na, luxanduva olukhulu. Ke ngoko, ukunqanda iingxaki, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukujonga nosapho ukuba ngaba bakulungele ukukhathalela kwaye bayakuthanda.
Nje ukuba isigqibo senziwe, ungaqala ukukhangela umhlobo wakho omtsha onemilenze emine. Ewe kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba abafuyi abaqeqeshiweyo bathengisa iinjana ezimbalwa 800 euro. Eli xabiso linokuba lincinci kwivenkile yezilwanyana.
Ngaba inokufunyanwa ukuba yamkelwe?
Ngokuqinisekileyo akunjaloUbuncinci ayizizo iikati ezicocekileyo zaseSingapore, kuba yiyo loo nto iingcali zizama ukwenza konke okusemandleni ukuyikhusela. Unokufumana iintlobo ezixubekileyo kwindawo yokuhlala izilwanyana okanye umbutho.
Ngaba ungathanda ukubona eminye imifanekiso yekati ye-Singapura? Ewe, ukugqitywa, asicingi ukuba kungumbono ongcono kunokukushiya neefoto ezininzi:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Ikati ye-singapura
Ikati entle ye-Khao Manee
Uyinika nini ikati ukuba yamkelwe?